theZOMI: Burma News International - March 29, 2013
Burma News International - March 29, 2013
Curfews imposed after violence in Bago Region
Police in Myanmar's western Bago Region trying to prevent attacks on Muslim neighborhoods from spreading to other towns have started 24-hour patrols. They are also receiving regular updates to try to stop attacks before they occur.
Government authorities have applied pressure to 30 villagers in Cha Khan village who have refused to relocate, to make way for the construction of the Dawei deep-sea port. The villagers are refusing to move until they are given what they think is fair compensation.
We needaresolution for military dealings: Gen Yawd Serk’s letter to U Aung Min
The Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) wrotealetter to U Aung Min, Vice Chairman of Union Peacemaking Working Committee (UPWC) to clarify the terms of agreement in militarily active zones which is ambiguous for both sides and creates misunderstanding as clashes between the Burma army and RCSS/SSA are erupting now and then.
The Myanmar Mahar Dana Company calledameeting to discuss with Htilon villagers their plans to build an antimony processing plant near Htilon village, Hlaingbwe Township, in Karen State.
Hoteliers and travel agents in Rakhine State say that tourism is booming in the western Rakhine beach resort of Ngapali while further north the historical site of Mrauk-U has been all but deserted this year.
The Department of Border Trade has announced thatameeting to discuss trade between the Bangladesh and Myanmar and the high security fence that stretches along border between the two countries has been postponed until May due to ongoing conflict in Rakhine State.
Although there are reasons to be hopeful about Myanmar now, events of the past ten days have castadark shadow over the country. The violence against Muslims in Meiktila, which then spread to Naypyitaw, Bago and threatened Yangon, is so serious it has drawn the attention of the UN Special Adviser on the Prevention of Genocide. If it spreads and is not stopped, it could result in the Good Friday and Easter Sunday story in reverse – flickers of hope and light snuffed out by brutal violence and terror.
ရှမ်းမြောက်တွင် KIA နှင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဒေသရှိ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ ဂန်မိန်းဒေသ ကောင်းဝွေဘွမ် (Kawng Woi Bum) သို့ အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင် လာသောကြောင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အကြမ်းဖက်မှုများတွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားသည့် ပုံစံ မြင်တွေ့နေရဟု ကိုမင်းကိုနိုင်ပြော
IMG_5883မြို့ကြီးအချို့၌ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များတွင် ပါဝင်နေသူများသည် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားသည့် ပုံစံမျိုး မြင်တွေ့နေရကြောင်း ၈၈မျိုး ဆက်ကျောင်းသား ခေါင်ဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်က ရန်ကုန်ရှိ ၎င်းတို့ရုံးခန်းတွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်။
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်ရှိ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့ လွယ်လန်း နှင့် လွယ်စေး တောင်ကြော တဝိုက်၌ ယမန်နေ့ ညနေပိုင်း အချိန်က တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူး စိုင်းလက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ထောက်ပံ့နိုင်ရေး အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က တိုက်တွန်းလိုက် သည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် လျှောက်ထားချက် ငြင်းပယ်ခံရ
ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင် အမှတ် ၁၄ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း တည်ဆောက်နေမှု ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားချက်ကို ယမန်နေ့က ငြင်းပယ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း လွိုင်ကော်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ငြင်းပယ်သည့် အမိန့်( အမှတ်စဉ် ၊ ၁ / ၂၀၁၃) ဖြင့် အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကချင်ဒုက္ခသည် ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ပြုလုပ်
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေသည့် ဈေးရောင်းပွဲတော်တခု ကွာလာလံပူမြို့ရှိ Chinese Assembly Hall တွင် ယနေ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ချင်းပါတီနှစ်ခု ပူးပေါင်းရန် သဘောတူ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့် ချင်းအမျိုးသားပါတီ (CNP) နှင့် ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီ (CPP) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ပါတီတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန် သဘောတူအတည်ပြုလိုက်ပြီဟု နှစ်ပါတီခေါင်းဆောင် တို့က ပြောသည်။
မီးဘေး ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးများ အခြေခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း လိုအပ်နေ
ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းက မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေ အနေနဲ့ လိုအပ်မှုများစွာ ရှိသည့်အနက် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အခြေခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေလည်း အဓိက လိုအပ်နေကြောင်း ကရင်နီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ် စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရမှု ၄ လပြည့် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
IMG_6106မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖြိုခွဲခံခဲ့ရမှု ၄ လပြည့်သည့် ယနေ့တွင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့သူအား အစိုးရမှ အမြန်ဆုံးအရေးယူပေးရန် ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ စုပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် မဟာမိတ်အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-NLD က အသိအမှတ်ပြုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-လွတ်မြောက် နယ်မြေ(NLD-LA)က ယနေ့ ပြောကြား လိုက်သည်။
ကျားဖြူ ဥက္ကဌတူ သတ်သည့်တရားခံများ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ကျားဖြူဥက္ကဌ၏ တူတော်သူကို သတ်သော ၀ရမ်းပြေးတရားခံများကို ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးနေကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ စုံစမ်းသိရသည်။